Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ozi ọhụrụ iji chebe ụwa nke NASA na SpaceX weputara
Naanị otu akụkụ nke atụmatụ nchekwa mbara ala NASA buru ibu, DART ga-emetụta asteroid ama ama nke na-abụghị ihe iyi egwu n'ụwa.
NASA's Double Asteroid Redirection Test (DART), ozi zuru oke nke mbụ n'ụwa iji nwalee teknụzụ maka ịgbachitere ụwa megide ihe egwu asteroid ma ọ bụ ihe egwu comet, malitere Wenezde na 1:21 am EST na a. SpaceX Rocket Falcon 9 sitere na Space Launch Complex 4 East na Vandenberg Space Force Base na California.
Naanị otu akụkụ NASA's ibu planetary agbachitere atụmatụ, DART - wuru na jisiri site Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) na Laurel, Maryland - ga-emetụta a mara asteroid nke na-abụghị ihe iyi egwu Ụwa. Ebumnobi ya bụ ịgbanwetụ mmegharị ahụ asteroid n'ụzọ enwere ike tụọ ya nke ọma site na iji teliskop ndị dabeere n'ala.
DART ga-egosi na ụgbọ elu nwere ike iji aka ya gaa na asteroid ebumnuche wee kpachaara anya dakọọ ya - usoro mgbagha a na-akpọ mmetụta kinetic. Nnwale ahụ ga-enye data dị mkpa iji nyere aka kwado nke ọma maka asteroid nke nwere ike ibute ihe egwu n'ụwa, ma ọ bụrụ na achọpụtara ya. A ga-ahapụ LICIACube, igwe CubeSat na DART nyere site na Italian Space Agency (ASI), tupu mmetụta DART were weghara onyonyo nke mmetụta yana igwe ojii na-akpata. Ihe dị ka afọ anọ mgbe mmetụta DART gasịrị, ọrụ ESA (European Space Agency) Hera ga-eme nyocha zuru ezu nke ma asteroids, na-elekwasị anya na olulu mmiri nke ndakpọ DART hapụrụ na mkpebi ziri ezi nke oke Dimorphos.
"DART na-atụgharị akụkọ ifo sayensị ka ọ bụrụ eziokwu sayensị ma bụrụ ihe akaebe na NASA na-arụ ọrụ na ihe ọhụrụ maka abamuru mmadụ niile," kwuru. NASA Onye nchịkwa Bill Nelson. "Na mgbakwunye na ụzọ niile NASA si enyocha eluigwe na ụwa na ụwa anyị, anyị na-arụkwa ọrụ iji chebe ụlọ ahụ, ule a ga-enye aka chọpụta otu ụzọ dị irè isi chebe ụwa anyị pụọ na asteroid dị ize ndụ ma ọ bụrụ na a chọpụta na na-aga n'ụwa."
N'elekere 2:17 nke ụtụtụ, DART kewapụrụ na ọkwa nke abụọ nke rọketi ahụ. Nkeji ole ma ole ka nke ahụ gasịrị, ndị na-arụ ọrụ ozi natara data telemetry ụgbọ elu nke mbụ wee malite usoro idobe ụgbọ elu ahụ ka ọ bụrụ ebe dị mma maka ibuga usoro mbara igwe ya. Ihe dị ka awa abụọ ka nke ahụ gasịrị, ụgbọ elu ahụ rụchara nke ọma n'iwepụta ụgbọ elu ya abụọ dị n'ogologo dị ụkwụ 28 n'ogologo. Ha ga-enye ike ma ụgbọ elu na NASA's Evolutionary Xenon Thruster – Azụmahịa ion engine, otu n'ime ọtụtụ teknụzụ a na-anwale na DART maka ngwa n'ọdịnihu na ọrụ oghere.